Visa Verization Tevera 3 Matanho ehope dzako Hupenyu muUAE
Mumiriri weAU angabvumidza vhiza yako yekushandisa here? Tarisa Zvino!
Visa Verization - Tinoda kukuzivisa iwe iwe wakunda hupenyu hutsva muDubai!
Iwe une Won Visa Verization kuDubai!
Tarisa kukodzera kwako kweDubai visa chimiro!
Ini ndinoda kufamba neFamily
Iwe une sarudzo yekutamira neyeMhuri yako kuenda kuDubai
Nyika kana mudunhu
Kopi yePasipoti yako ID peji (Nharembozha)
Yako ID Nhamba (Passport kana Drivig License)
Ndokumbirawo Nyora nhamba chete
Sarudza Yako Yakanaka Nzvimbo:
Middle EastEuropenyika dzakabatana Kanadha
Visa Services (ndapota sarudza imwe yeanotevera sarudzo)
$ 29.99 Visa + Jobho Kutsvaga mukati mezuva re60 + Mari Kudzoserwa Guarantee
$ 19.99 Visa Chikumbiro + Basa Guarantee
$ 9.99 Visa Chikumbiro + Verization
Iwe unozoVhenekwa Visa uye Shandira muUnited Arab Emirates.
* Ndokumbirawo ubaye Inotevera uye ugadzirise nhoroondo yako neruzivo rwekubhadhara kweVisa & Passport kukodzera. Iwe, Uchazovhenerwa Visa uye Shandira muUnited Arab Emirates.
Semuenzaniso wemufananidzo wepasipoti yako Frontside (Passport)
Muenzaniso weVisa Inotumirwa muUnited Arab Emirates
Visa Verization kuDubai
Kutama kuDubai - Chii Chinotevera?
Iye zvino: Mushure mekutarisa ako ruzivo timu yedu ino tumira kwauri kune rumwe ruzivo ruzivo trouse Email, Saka, tapota ita shuwa kuti uno tarisa email yako zuva rega rega kuti uwane zvimwe kutamiswa ruzivo. Usati waenderera mberi uine chokwadi chekuti iwe wedzera zvese zvemashoko ako kune yedu kambani webhusaiti. Kune chete nhanho dze3 dzaunofanirwa kutevera, simbisa yako mbiri, upload CV uye ipapo iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti iwe uchave unishuwarenzi webasa muUnited Arab Emirates. Padivi rakanaka, tiripano kukubatsira kubhururuka uchienda kuDubai uye isu tiri kudarika 100% yechokwadi kuti iwe uchaenda muDubai.
Ndokumbira Wongorora Email yako!
UAE pasipoti Ruzivo
Isu tinobvuma nemufaro ruzivo rwenyu rwatakatambira kubva kwamuri kuburikidza neDubai City Company yeVisa Lottery muAU.